Ozi ọma - Ozi oma banyere aluminium n’uzo
Ojiji nke iji osisi eme ihe nke oma n'ime oke obodo emeela ka a na-egbusi oke ohia, mmetọ a na-ekpofu ahihia nke ihe owuwu, na nnukwu mbibi nke gburugburu ebe obibi. Nkọwapụta na ntinye nke usoro aluminium na-eme ka owuwu ụlọ ka mma, ngwa ngwa ma nwee akụ na ụba, n'usoro mbenata ikuku carbon na teknụzụ na-acha akwụkwọ ndụ, ọ bụkwa nnukwu ihe ọhụụ na ngalaba iwu ụlọ.
Anyị na-agba mbọ iji na-akwalite mgbanwe na upgrading nke na-ewu ụlọ ọrụ na-enye akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ngwọta maka obodo mepere emepe. Otu ndị R&D nwere ụlọ ọrụ teknụzụ ụlọ ọrụ amaara ama ama ama na mba ndị ọkachamara na-enwe ọpụrụiche pụrụ iche site na Ọchịchị Steeti, na-agbaso R&D na ọhụụ nke ngwaahịa ngwaahịa aluminium, ma na-akwalite sistemụ eserese. A na-etinye usoro mpempe akwụkwọ nke ụlọ mbụ nke aluminom na nnukwu ọrụ dị elu, ma merie ahịa Ndị ahịa mara nke ọma.
Anyị na-enye ndị ọkachamara na-ese ụkpụrụ ụlọ ọrụ aluminium na-eme ka ọrụ rụọ ọrụ nke ọma ma mepụta nsonaazụ ka mma na obere mpempe akwụkwọ. Emepụtara ihe karịrị otu puku ụlọ ma dozie ọtụtụ nsogbu ụlọ ọrụ dịka oke-elu, ụlọ duplex, okpuru ulo, ụlọ nzukọ ezubere, na paseeji okpuru ala.
Nhazi njikwa, njikwa siri ike na njikwa nke usoro ọrụ ọ bụla, iji hụ na ebuputara ngwaahịa na ntụpọ efu.
Nye n'efu aluminom, n'efu formwork nnọchi formwork mkpụrụ, ọkọlọtọ panel.
Aluminium eji emeghari ahihia nke ozo abanyela asambodo ASI, ihe omuma nke aluminom, na-akwalite ahihia ahihia na mmepe nke ulo oru aluminom.
Ka ọ dị ugbu a, ngwaahịa na ọrụ ya na-ekpuchi mpaghara 18 na obodo gafee mba ahụ, ma ziga ya na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Africa na mpaghara ndị ọzọ esenidụt. Ọ na-ngwa ngwa toro a zuru ụwa ọnụ magburu onwe ya na-ewu formwork technology ụlọ ọrụ.
Ugbu a n'oge a pụrụ iche, yana mmetụta Corona na mba ọ bụla. Anyị na-enye ọnụahịa pụrụ iche iji nyere aka na-ewu ụlọ iji weghachite. Jiri obi ụtọ nabata ajụjụ gị.
Metal Cuplock Scaffolding, Nrụgide oru Ringlock Scaffolding, Kwikstage Scaffolding Ngwa, Scaffolding Kemeghi ịghasa Jack, Akụkụ Ulo olu nke Ringlock, Ringlock Scaffolding mgbodo,